Maxey ka wada hadleen Madaxweyne Farmaajo & madaxda Imaaraadka? | Baydhabo Online
Maxey ka wada hadleen Madaxweyne Farmaajo & madaxda Imaaraadka?
Madaxweynaha dawladda Faderaalka Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa kusugan dalka Iskutaga Imaaraatka Carabta, isagoo la kulmay madaxda dalkaas oo ay ka wada hadleen arrimo xasaasi ah.
Kaabayaasha dhaqaalaha Soomaaliya horumarintooda, cilaaqaadka labada dal iyo qorshe kasta oo ku aadan dibu kabashada dalka ayay dhinacyadu ka wada hadleen.
Madaxweynaha Soomaaliya ayaa u gudbiyey dawladda Imaaraatka Carabta taageerada ay u baahan tahay dawladda Dhexe ee Soomaaliya, si gaar ahna dhanka dhaqaalaha, Dibu dhiska ciidamada iyo qorshaha sugida amniga ayaa ugu horeeyey arrimaha ay codsatay dawladda Faderaalka.